halkee laga bilaabayaa otomaatiga tijaabada ee degel jira?
Ugu Weyn Ee Otomaatiga Xagee laga Bilaabayaa otomaatiga Imtixaanka ee Shabakad jirta?
Xagee laga Bilaabayaa otomaatiga Imtixaanka ee Shabakad jirta?
Andrew ayaa weydiinaya:
Waxaan dhowaan ku biiray shirkad fadhigeedu yahay web-ka oo ah xubintoodii ugu horreysay QA. Websaydhka waxaa la soo saaray shantii sano ee la soo dhaafay, waqtiganna, horumariyeyaasha iyo xubnaha kale ee kooxda ayaa tijaabada qaadayay.
Ma jiro wax rasmi ah oo QA ah ama habka imtixaanku meesha yaal, sidaa darteed dhammaan tijaabooyinka waxay ahaayeen kuwo inta badan ad-hoc ah.
Hada maareeyuhayga masuulka ka ah bixinta softiweerka, wuxuu iga doonayaa inaan abuuro xirmo tijaabin regression otomaatig ah oo kooxdu fulin karto markasta oo ay horumariyaan astaamo cusub.
Su'aashaydu waxay tahay: xagee ka bilaabayaa otomaatiga tijaabada si aan u dhiso xirmadan dib u gurashada ee degel shaqeynaysay in ka badan shan sano?
Wixii fikrado ah / talo soo jeedin ah ayaa si weyn loo qadarin doonaa.
Mar haddii degelku shaqeynayay oo u adeegayay macaamiisha nool dhowr sano, markaa waxay ku jirtaa xaalad qaan gaar ah. Bisayl ahaan, waxaan ula jeedaa (rajo ahaan) inaysan jirin cayayaanno halis ah oo ka muuqda nidaamka haddii ay jiraanna, waxay noqon doonaan arrimo khiyaano ama cakiran oo aan si fudud qof walba u dareemi karin.
Waxa aan maahan samee, waa in la isku dayo in dib loo eego imtixaannada dhammaan sheekooyinka horay loo soo saaray oo qayb ka noqday nidaamka. Si kastaba ha noqotee, waxa aan dooneyno waa dhowr xaaladood oo muhiim ah oo jimicsiga nidaamka dhammaadka-dhamaadka si loo hubiyo in horumarka mustaqbalka uusan khatar gelin howlaha jira.
Talaabooyinka hoose waa tilmaamo loo adeegsan karo degel horey u jiray oo horeyba loo aasaasay si loo helo xaaladaha muhiimka ah iyo habka loo ballaariyo kuwan si loo abuuro xirmo dib u celin shaqeyn ah.
Miyay tahay in Imtixaan otomaatig ah ay sameeyaan koox gaar ah oo heegan ah
Marka hore waxaad ubaahantahay inaad barato naftaada websaydhka iyo astaamahiisa. Ka bilow sahaminta barta oo baro hab dhaqankeeda. Intii aad sidaas samaynaysay, waxaad sidoo kale abuuri kartaa khariidad maskaxeed qaab dhismeedka bogga, bogagga ay jiraan iyo astaamaha ku jira bog kasta.
Khariidadaha Maskaxdu waa hab fiican oo lagu helo sawir-qaad heer-sare ah iyo muuqaalka guud ee websaydhka oo dhan. Waxaan marwalba tixraaci karnaa khariidadaha maskaxda si aan u helno faham ku saabsan sida bogagga ay isugu xiran yihiin.
2. Isu ururi metrik
Ka soo ururi qiyaasta adeegsiga goobta suuq-geynta iyo / ama kooxda falanqaynta. Ganacsiyada badankood waxay ku dhejiyaan 'raadinta calaamadaha' sida Google Analytics ee shabakadooda si ay u awoodaan inay la socdaan sida isticmaaleyaashu u adeegsadaan barta. Waxaa jira macluumaad badan oo ku saabsan habdhaqanka isticmaalaha iyo waxyaabaha caadiga ah safarada isticmaalaha taas oo lagala soo bixi karo nidaamyadan raadraaca ah.
Sababta aan ugu baahan nahay inaan xogtaan u ururinno ayaa ah inaan awood u yeelanno inaan mudnaanta siino waxa imkaaniyaadka tijaabada ah ee ugu horreeya otomaatiga si aan u helno qiimaha ugu badan waqtiga ugu yar ee suurtogalka ah.
3. Muuqaal Muhiim ah
Ka bilaw otomaatiga dhacdooyinka aasaasiga ah ee dhammaadka illaa dhammaadka iyada oo loo marayo arjiga shabakadda. Tani waxay aasaas u noqon doontaa 'xirmada qiiqu ee qiiqa'. Tusaale ahaan, codsi shabakadeed e-commerce ah, muuqaalka ugu dambeeya ee dhamaadka waa:
Homepage -> Natiijooyinka raadinta -> Faahfaahinta alaabta -> Soo galitaanka Macaamiilka / Diiwaangelinta -> Faahfaahinta lacag bixinta -> Xaqiijinta dalabka
Waxaa muhiim ah in la ogaado, in laga bilaabo, waxaan kaliya u baahanahay inaan hubino inaan ka gudbi karno bogagga, laga bilaabo Homepage iyo gaarista bogga xaqiijinta amarka. Ujeeddadu waa in la hubiyo in socodka iibsigu uusan jabin, halkii laga hubin lahaa bog kasta shaqadiisa si faahfaahsan.
Markaan helno qulqulka isticmaalaha ugu fudud uguna badan ee daboolan, ka dib waxaan eegi karnaa kala duwanaansho badan. In kasta oo ay jiraan iskudhafyo badan oo ah astaamaha iyo bogagga, qofku wuxuu ogaan lahaa inay runti jiraan in yar oo safarro adeegsadeyaal ah oo loo maro nidaamka u baahan tixgelinta.
Baadhitaanka xogta falanqaynta, waxaad u badan tahay inaad ka heli doonto 80% adeegsadayaashu inay mari doonaan isla dariiqyada laakiin leh xog kala duwan. Sidaa darteed, baakadeena dib-u-celinta qiiqa waa in lagu dhisaa iyadoo lagu saleynayo xaaladdan.
4. Kordhinta Caymiska
Qoraal ku saabsan caymiska, halkan kama hadlayo caymiska imtixaanka; diiraddu waa caymiska muuqaalka .
Kordhi xirmada dib u celinta qiiqa si aad u abuurto xirmo ficil celin ballaaran oo ficil ah adoo adeegsanaya khariidadaha maskaxda isla markaana ku dabaqaya farsamada tijaabada kala guurka ee gobolka si aad u dhisto xaaladaha.
Qodobbada Gelitaanka - Marka hore, waxaan marka hore u baahanahay inaan helno meelaha laga soo galo nidaamka. Meelahaan laga soo galo waxay noqon karaan isticmaale soo degaya bogga hoyga, bogga faahfaahinta wax soo saarka, ama a SEM (Suuqgeynta Mashiinka Raadinta) bog gaar ah.
Mar alla markaan garano bog degitaan gaar ah, waxaan u baahannahay inaan aragno astaamaha ku jira boggaas ee uu isticmaalehu la macaamili karo. Tani waa meesha khariidadaha maskaxdu ay faa'iido badan u leeyihiin. Waxaan haynaa aragti guud oo heer sare ah oo ku saabsan bogga iyo astaamahiisa.
Halkan, macnaha astaantu waa mid ka mid ah hal nooc sida sanduuqa hoos-u-dhigga ikhtiyaariga ah ama buuxinta foomka faahfaahinta isticmaalaha ama sida ugu fudud ee gujinta xiriiriyaha.
Gobolka bilowga ah - Marka ugu horreysa ee aan ka degno barta laga soo galo arjiga, waxaa jiri doona gobol la xiriira boggaas. Waxaan ku diiwaangelineynaa sida ugu horreysa ee dalabka. Mar kasta oo aan la macaamilno mid ka mid ah astaamaha ku yaal boggaas, waxay u badan tahay inaan beddelno xaaladdeeda bilowga ah.
Kicin - Astaamaha qaar, markii lala falgalo, ama waxay wada buuxinayaan isla bogga (tusaale, kala-soocida noocyada ayaa sii wadaya isla bogga, laakiin xogta waa la kala soocayaa) ama u gudubista bog kale (tusaale ahaan soo gudbinta aqoonsiga isticmaalaha saxda ah). Waxa keena kala-guurkan, ama isla bogga ama bog kale, waxaa lagu magacaabaa kicinta, sida badhanka gudbinta.
Xaqiijin - Markaa waxaa jira sheegashooyin. Mar kasta oo xaaladda dalabka la beddelo, iyadoo lala falgalayo muuqaal, waxaan u baahan nahay inaan sameyno caddeynno si aan u hubinno xaaladda gobolka cusub. Tusaale ahaan, markaan soo gudbinno foom galitaan ah oo la adeegsaneyno xogta isticmaaleha saxda ah, waxaan u baahanahay inaan sheegno in isticmaaleha uu hadda soo galay.
Waxaan ku sii wadi karnaa isla qaab kumeelgaarka cusub, ama dib ugu laabanaa bilowgii gobolka oo aan kula falgalnaa muuqaal kale illaa aan ka daboolno dhammaan astaamaha muhiimka ah ee khariidadaha maskaxda.
Waqti ka dib, heerka kalsoonida ee geynta koodhka cusubi wuu sii kordhayaa maaddaama xaalado badani iswadayaan oo ay u socdaan si joogto ah.
hel taariikhda hadda ee Java
iskuday faylka qabashada lama helin marka laga reebo java
Imtixaanada Guud ee Qalabaynta Qaldan
Hababka Jabsiga Codsiga Webka
Top 8 Aaladaha Raad-raaca Xannibaadda Furan ee Furan
Aasaaska Shabakada Aasaasiga iyo Terminologies
Tilmaamaha BDD iyo Habdhaqanka Ugu Fiican
Akhriso Faylka Guryaha ee Java Iyadoo lasocota ResourceBundle